Mikomy Ny Tanora Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2017 12:13 GMT
Sary: Pixabay, nataon'i Kevin Rothrock
Isaky ny mahavita asa iombonana maharitraritra hikarakaràna hetsi-bahoaka ny mpanohitra ara-politika, dia lazain'ireo mpitarika ao amin'ny firenena sy ireo mpikatroka amin'ireo mpiray tanindrazana aminy fa ” nifoha ao anaty firenena vaovao” ry zareo. Mafy ny hetahetam-piovàna tampoka, hany ka nametraka ny fanantenana goavana farany ho an'i Rosia ilay hetsika nanerana ny firenena tamin'ny Alahady lasa teo : ireo tanora izay mandrafitra ny taranaka ho lehibe voalohany dia saika eo ambany fitondran'i Vladmir Putin daholo.
Alexey Navalny, ilay mpanao ady masina amin'ny kolikoly sady antenaina ho filoha izay nitarika ilay hetsika tamin'ny Alahady teo no toa nitrandraka io tahiry ara-politikan'ny taranaka vaovao io.
Tsy vitan'ny hoe tonga maro tamin'ilay hetsika fotsiny ny tanora tamin'ny faran'ny herinandro teo, fa nankahery ny fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly ataon'i Navalny ihany koa tamin'ny fandrisihina ireo mpanabe any an-dakilasy sy fizaràna ny sarin'ireo mpampianatra sy mpitantana miezaka mamoky ireo mpianatra amin'ny hevitra manohitra hetsika ara-politika.
Tamin'ny 28 Martsa, nanoratra ho an'ny haba-tranonkala TJournal i Sergei Zvezda, namakafaka ireo fifandonana be mpamoaka indrindra teo amin'ireo mpianatra sy mpampianatra nanerana an'i Rosia tamin'ny volana lasa. Fintinin'ny RuNetEcho eto ambany ny tatitra.
Tamin'ny 28 Martsa, nisy mpikatroka iray nizara lahatsary nirakitra ny tao an-dakilasy tany amin'ny Oniversitem-panjakana tany Tomsk, izay nanapempoan'ilay mpampianatra, Nikolai Pichkurov, ny mpianany nanatrika ny hetsika manohitra ny ady atao amin'ny kolikoly amin'ny Alahady. “Mamon-drongony ” no niantsoany azy ireo sady lazainy fa ny hahazo vola fotsiny no nandraisany anjara tamin'ilay hetsika.
Talohan'ny nanazavàny fa ara-dalàna ny kolikoly, raha tsy singa manan-danja any anatin'ny governemanta tsirairay mihitsy aza, dia nitalaho tamin'ny iray kilasy izy hoe : “mitadiava fomba hafa hikaramàna.” Nambaran'i Pichkurov fa ” raha tsy manao kolikoly ny Fanjakana, midika izany fa fanjakana tsy ilain'ny olona izy “, nampitaha ilay hetsika natao tamin'ny alahady amin'ilay hetsi-panoherana izay nandrava ny Firaisana Sovietika tamin'ny 1991.
Tany amin'ny sekoly iray any ivelan'i Bryansk, andro vitsy talohan'ireo hetsi-panoherana tamin'ny Alahady lasa teo, niditra tao amin'ny efitra fianarana iray tao amin'ny ambaratonga faharoa ny mpitandro filaminana ary nisambotra an'i Maxim Losyev noho ny namporisihany ny mpianatra namany hamonjy ilay fihaonana. Taorian'ny nitondrana azy hatao famotorana dia nipetraka niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra aminy ny talen'ny sekoly sady nanome fampianarana azy ireo nandritra ny sivy minitra momba ny loza ateraky ny fanarahana an'i Alexey Navalny, tamin'ny fanalàna baraka ny fanabeazana ho olom-pirenena sy ny tantara.
Nadikan'ny RuNet Echo ho amin'ny teny Anglisy ny fifampiresahana. Azonao vakiana eto izany.
Tamin'ny 16 Martsa, nangataka fahazoandàlana hanao fanehoankery hiadiana amin'ny kolikoly ireo mpianatra ao amin'ny Oniversitem-panjakana any Komsomolsk-on-Amur ( eo ho eo amin'ny 1126,5 km avaratra atsinanan'i Vladivostok) sy ireo mponina marobe ao an-toerana ny Alahady 26 Martsa. Tao anatin'ny ora vitsy, nolazain'ireo mpianatra fa noresahan'ny mpitantana ny Oniversite izay nahafantatra ilay fangatahana alàlana tamin'ny fomba mahagaga, ry zareo sady norahonana ny ho voaroaka ao an-tsekoly.
Nilaza tao amin'ny haba-tranonkalam-baovao TJournal i Sergei Zhilenko fa nanaisotra ny fangatahany tany amin'ny tanàna izy sy ny mpiara-mianatra aminy anankiroa, taorian'ny nilazan'izy telo fa naharay antso mampihorohoro avy amin'ny oniversite, sady avy eo nahafantatra fa nisy mpikambana iray ao amin'ny mpanolontsain'ny tanàna nangataka fahazoandàlana ihany koa hanao hetsika hanoherana ny ady atao amin'ny kolikoly amin'io Alahady io.
Ambaran'i Zhilenko fa nifandray taminy matetika ny lefitry ny sojaben'ny raharaha akademikan'ny sekoliny, izay nanahy tany am-boalohany fa ny kolikolin'ny oniversiteny no kendren'io hetsika io, hoy izy. Na efa nohazavainy aza fa misokatra kokoa ilay fanehoankery, nolazain'i Zhilenkko fa nampitandremana izy fa ohatra ny mailo amin'ny zavatra ataony ny Sampan-draharaha Federalin'ny Fiarovana Rosiana.
Tato aoriana, nolavin'ilay sojabe ilay fiampangàna ny sekoly ho manandrana manery ny mpianatra hanohitra amin'ny fomba rehetra ny hetsika ara-politika.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa, mpampianatra iray tao amin'ny Oniversite Federalin'i Serbia any Krasnoyarsk no niteny fa noterena hiala amin'ny asany satria nandefa ny horonantsary fanadihadiana nataon'i Alexey Navalny, mpianany, miampanga ny Praiministra Dmitry Medvedev ho nanao kolikoly avo lenta — io lahatsary izay nahazo fijerena maherin'ny 14 tapitrisa ao amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao io no nahatonga ilay hetsi-panoherana tamin'ny Alahady teo.
Lazain'i Konstantinov fa noterena hametra-pialàna izy noho ny fanoherana manokana ( haveriny fa avy amina ray aman-dreninà mpianatra iray) ny politikan'i Navalny. ” Raha nampianatra aho ka nitantara, ‘ndeha atao hoe, ny fanjakan'ny biby ao amin'ny ala taiga Siberiana — lohahevitra hafa mivoana amin'ny [fandaharam-pianarana ] — angamba tsy bedy sy tsy voaroaka aho,” hoy izy tato aoriana tao amin'ny tafatafa tamin'ny fahitalavitra Dozhs.
Ny 26 Martsa, ilay andron'ireo hetsi-panoherana Alahady tany Rosia, mpianatra maro tao amin'ny Oniveriste tany amin'ny faritr'i Rostov no nizara ny hafatra voarainy tampoka, mamporisika azy ireo tsy handray anjara amin'ilay fanehoankery amin'ny ady amin'ny kolikoly, avy tamin'ny Filànkevitry ny Mpampanoa Lalàna ao an-toerana. Lazain'ny mpianatra sasany fa rahonana ho roahana izy ireo raha mamonjy ilay hetsika.
Nozarain'i Leonid Volkov, lehiben'ny fampielezankevitr'i Navalny tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ihany koa ireny tatitra ireny, tamin'ny fibitsihana ny sarin'ny lisitra iray nilazàny fa terena hanao sonia sy mampanantena ny tsy hamonjy ireo famoriambahoaka hiadiana amin'ny kolikoly ireo mpianatra any Rostov.
Mpianatra ao Rostov-on-Don ampitahorina horoahana ary terena hanao sonia taratasy hoe tsy handeha hamonjy ilay famoriambahoaka hatao rahampitso
Nanana olana tamin'ny sojabeny i Roman Koterev, mpianatra ao amin'ny Oniversiten'ny Haifampianatra (pédagogie) ao amin'ny Fanjakan'i Orenburg, tamin'ny volana Martsa, rehefa nanomboka nizara trakta kely ohatra ny vola taratasy, mamporisika ny olona hamantatra kokoa ny mikasika ilay fanadihadian'i Navalny momba an'i Dmitry Medvedev. Lazainy fa nampanantsoin'ny sojaben'ny sekoly ( mpikambana ao amin'ny antoko politika eo amin'ny fitondrana, Rosia Miray) izy, izay nampitandrina azy fa hadihadian'ny mpiasam-panjakana avy any amin'ny Ministeran'ny Fanabeazana ny hetsika ataony.
Tamin'ny Alahadin'ny hetsika ady amin'ny kolikoly tany Vladmir, notantarain'ireo mpianatra tany an-toerana tamin'ny mpanao gazety fa ny momba an'i Navalny, nataony hoe olon'ny tandrefana, no nampianarin'ireo mpampianatra tao amin'ny Oniversitem-Panjakana tany Vladmir talohan'ilay fanehoankery, ary nampitandremany fa “fanasàna atidoha” ny tanora, fanitikitihana ny saina ilay lahatsariny ao amin'ny YouTube. Notantarain'ireo mpampianatra ireo ny mpianatra ihany koa ny faharesen-dahatra tamin'ny heloka bevava vitan'i Navalny taminà tranganà fanodikodinambola, izay lazain'ireo mpomba an'i Navalny fa vokatry ny raharaham-pitsarana nidiran'ny resaka politika.
Tamin'ny 17 Martsa, noteren'i Farida Kulmukhametova, mpampianatra ao amin'ny Sekolin'ny Haikanton'ny fanjakan'i Maosko i Daniil Pilchen, mpianatra taona faha-efatra, hamaky amin'ny feo avo tamin'ireo mpianatra iray kilasy ny lisitr'ireo ” mpanoratra matoan-dahatsoratra an-gazety faha-dimy” sy ireo “mpamadika”. Ahitàna ireo Rosiana mpanao gazety sy mpanentana malaza amin'izao fotoana izao ilay lisitra. Kanefa, nataon'ilay mpianatra toy ny vazivazy ilay asa, novakiany tamin'ny fanesoana niaraka tamin'ny vokany tafahoatra ilay lisitra, nahatonga fihomehezana ho an'ny iray kilasy.
Avy eo nalain'i Kulmukhametova ilay lisitra ary novitainy ny famakiana azy.
Ny 23 Martsa, norahonan'i Kulmukhametova ho roahana izy, na mety ho tapahana ny vatsim-pianarany, hoy i Plichen. Herinandro taty aoriana, i Kulmukhametova no nandao ny sekoly, nametra-pialàna tampoka.